Yintoni i-GEO5 ibuyisa ngohlobo lwayo lwe-15 - i-Geofumadas
Okubuyisela i-GEO5 kwinguqulo ye-15
NgoJanuwari, 2013 Zobunjineli, ezintsha
Kwiminyaka embalwa edlulileyo ndenze uphononongo lwale software, ndicinga ukuba yeyona ilungileyo Oomatshini bokuphamba phantsi. Kule veki sinomdla omkhulu kupapasho lwenguqulo entsha ye-GEO5, esikholelwa ukuba iya kwamkelwa ngabasebenzisi besi sixhobo, ngendlela esidlula ngayo kwicandelo le-geoengineering ngaphandle kokhuphiswano oluninzi, ubuncinci kwindawo Umxholo we-Hispanic unombulelo kwinkxaso ekhuthazwe nguFine Latinamerica waseArgentina.
Olona tshintsho lubaluleke kakhulu kuguqulelo lwe15 lugxile kubunzulu be "Iqela leePiles", nangona ezinye izinto ezintsha kunye nophuculo kumgca wonke nazo zisebe, ngakumbi ekungeneni kwedatha eyenza uhlaziyo lohlalutyo lube ngcono ngakumbi. .
Masibone ukuba kuthetha ntoni oku:
Inkqubo yenza uhlalutyo lweqela lemfumba (isitya esingqongqo) usebenzisa indlela yasentwasahlobo (MEF) kunye nezisombululo zohlalutyo. Le nkqubo ithatha iigranga ezingunxantathu zemilo ethe nkqo, kunye nemithwalo esebenza kwiplanethi ephezulu yeplate, ithathela ingqalelo ulungelelwaniso kwimigangatho ethe tyaba kunye nokubandakanya zombini iifayile ezihamba emanzini kunye nezisigxina.
Kwinqanaba lokuhlaziya ulwazi unokufumana:
Uhlalutyo lobungakanani bokuma kokuma kweqela leemfumba kwimihlaba ehlanganayo njengebhlokhi eqinileyo.
Uhlalutyo lweefayile kwimihlaba engadityaniswanga (NAVFAC, tension tension, CSN).
Ukuncitshiswa komthamo weqela leemfumba (i-EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney).
Uhlalutyo lwezihlalo zeqela leefayile kumgangatho wokubambelela njengesiseko sentsomi.
Uhlalutyo lwezihlalo zeqela leefayile kumhlaba ongadityaniswanga ngokwePoulos, ijika lomthwalo.
Kwaye ngendlela yeNtwasahlobo (MEF) ungafumana uhlalutyo lweentshukumo ezintathu zoqobo kwiqela leefayile:
Uhlalutyo lokujikeleza kunye nokuguqulelwa kwemfumba ephezulu.
Ivumela inani lokungaxhumi lamatyala omthwalo.
Uhlalutyo lonxibelelwano phakathi kweplate engqingqwa kunye neefayile: ezisisigxina okanye ezibekiweyo.
Uhlalutyo lweefayile ezidadayo kunye neefayile ezisisigxina ngaphakathi kwengxondorha yelitye.
Ukubalwa okuzenzekelayo kokubalwa kwemithombo ecaleni kwendawo yemihlaba.
Ubukho bokungena kwimithombo eqhelekileyo (kwisiseko semfumba) kunye nkqo, ecaleni kobude beemfumba.
Uhlalutyo lokusasazwa kweziphene kunye namandla angaphakathi ecaleni kwendlela.
Ukuqiniswa komgangatho wokuqiniswa kwemfumba, ngokwe-EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP.
Inkqubo entsha yokufaka kunye nolawulo lohlalutyo lohlalutyo
Siyavuya ukukunikezela ngotshintsho olubalulekileyo, olwenza umsebenzi wakho ngeenkqubo ze-GEO5 zibe lula kakhulu.
Ulungiselelo lohlalutyo luhlanganisiwe kuzo zonke iinkqubo ze-GEO5.
Ngonqakrazo olunye unokutshintsha ngokupheleleyo phakathi koqwalaselo olwahlukileyo njenge: Into yokhuseleko okanye i-LRFD okanye ii-National Annexes Eurocode (iSlovakia, iPoland, Germany, Austria ...).
Ukucwangciswa kwangaphambili kwe-35 kumazwe athile.
Ubukho bokudala uqwalaselo oluchazwe ngumsebenzisi lohlalutyo oluthile.
Ubukho bokugqithisa useto oluchazwe ngumsebenzisi phakathi kwabasebenzisi abaliqela.
Olunye uhlengahlengiso kunye nokuphuculwa
Uhlalutyo oluzenzekelayo lwendibaniselwano zombini kwimeko yokuqinisekiswa ngokwe: EN 1997, DA1
Ukuphuculwa kokuphuculwa kokujikeleza kunye nokujikeleza kwe-polygonal
Umda kumazwe kunye neFactor yoKhuseleko iqulathe iimeko ezichaziweyo zoyilo.
Inkqubo yodonga lomgangatho eqinisiweyo
Ukubanakho ukwabela imihlaba eyahlukeneyo kwindawo eqinisiweyo
Ubukho bokungena kwemithwalo egxiliweyo ye-axis
Ubukho bokukhetha imigangatho yovavanyo lobungakanani obuncinci
Uxinzelelo lomhlaba, Iindonga
Ukwaziswa kwento yenxalenye yokumelana komhlaba ngokuhambelana ne-DA2
Olunye ulwazi unokulufumana kule:
Post edlulileyo«Edlulileyo Imiba emfutshane kunye nezinto ze-20,000 zokwenza
Post Next IQonga leMerika yaseMatriki ngeeMpawu eziphawulekayo zokungenelela kwimiziOkulandelayo "
I-2 Iphendula "Yintoni ibuyiswa yiGEO5 kuhlobo lwayo lwe-15"
Unokuzama ngokukhuphela ikopi yedemo mahala: http://www.finesoftware.es/descarga/file/
Unokufikelela kwakhona kwiividiyo zokufundisa ukuze ufunde ukusebenzisa imodyuli nganye, kwaye kule meko inkqubo yohlalutyo lohlalutyo olunohlobo lwe-15:
Unomdla kakhulu kukwenza ukuba ufune ukuzama.